News Collection: के हो वेब फिल्टरिङ?
के हो वेब फिल्टरिङ?
अचेल घर होस् वा कार्यालय कम्प्युटरमा इन्टरनेट छैन भने कम्प्युटरै नभएजस्तो हुन्छ। तर, इन्टरनेटका रमाइला साइटहरूमा हामीले पत्तै नपाई महत्वपूर्ण समय बर्बाद गरिरहेका हुन सक्छौं। घरमा बालबालिकाले अनावश्यक साइट हेरेर वा च्याट गरेर पढाइ बिगारिरहेका हुन सक्छन्। यस्तै समस्या कार्यालयमा पनि हुन्छ।
म्यासेन्जर, युट्युब, फेसबुकजस्ता साइट लगअन गरेर त्यत्तिकै छाड्ने वा ठूला फाइल डाउनलोड गर्न छाडिराखे कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पर्छ। भाइरसहरू सहजै छिर्न सक्छन्।
अरू कसैले कम्प्युटर ह्याक गर्न सक्छ। कम्प्युटरमा सुरक्षा प्रविधि अपनाइएको छैन भने भाइरस सल्किने सम्भावना मात्र एक क्लिकमा भर पर्छ। यसबाट बच्न इन्टरनेट पूरै बन्द नगर्ने र अनियन्त्रित प्रयोग पनि रोक्ने हो भने 'वेब फिल्टरिङ' आवश्यक हुन्छ। यसले विषयवस्तुअनुसार वेबसाइट निषेध वा खुला गर्छ।
फिल्टरले छान्ने काम गरेजस्तै वेब फिल्टरिङले इन्टरनेटको माध्यमबाट कम्प्युटरमा आउने विषयवस्तुलाई प्रवेश दिने/नदिने निर्क्यौल गर्छ। यसले रोक्नेबाहेकका साइटमात्रै खोल्न, डाउनलोड वा अपलोड गर्न सकिन्छ। वेब फिल्टरिङमार्फत् कुन-कुन समय, कुन-कुन कम्प्युटरमा के के चलाउन दिने भनेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
वेब फिल्टरिङका विभिन्न तह र तरिका हुन्छन्। घरमा एउटा वा दुइटा कम्प्युटर हुन्छ भने कार्यालयमा दर्जनौं कम्प्युटर हुन सक्छन्। वेब फिल्टरिङ हार्डवेयर वा सफ्टवेयर दुवै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ।
घरको इन्टरनेट विभिन्न उमेर समूहका सदस्यले प्रयोग गर्छन्। भाइबहिनी वा छोराछोरी अनावश्यक साइटमा झुम्मिइरहे कुन-कुन साइट नखुल्ने र कुन-कुन खुल्ने भनेर फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ। यसका लागि इन्टरनेटमै निःशुल्क सफ्टवेयरहरू पाइन्छन्।
सफ्टवेयरै नराखी कम्प्युटरमै साइट ब्लक गर्न पनि सकिन्छ। यसका लागि start-control panel-internet option-content भित्र गई अनावश्यक साइट ब्लक गर्न मिल्छ।
ब्राउजर (जस्तै इन्टरनेट एक्सप्लोरर) मा पनि tools को Inprivate Filtering मा गएर अप्सन हेरी इच्छाअनुसार साइटहरू ब्लक गर्न मिल्छ।
firefox2.0 मा google safebrowsing built in भएर आएको छ। यसमा रोक्न चाहेका साइटहरू गुगलबाटै जान नमिल्ने बनाउने सुविधा छ।
वयस्कका लागि मात्र भनिएका साइटहरू आफ्ना केटाकेटीले नहेरून् भन्ने लाग्छ भने firefoxले] the parental control for firefox नामको fox filter भन्ने सफ्टवेयर बजारमा ल्याएको छ। यो किन्नुपर्छ। त्यति महँगो भने छैन। सफ्टवेयर नै राख्ने हो भने k9web protection र Naomi जस्ता निःशुल्क सफ्टवेयर राखी access control गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक बजेट र कर्मचारी संख्या हेरेर कार्यालयमा हार्डवेयर वा सफ्टवेयर जुनसुकै विधिबाट वेब फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ। सानो कार्यालय र थोरै कर्मचारी छन् भने घरको कम्प्युटरमा जस्तै गरे हुन्छ। थोरै पैसामा सफ्टवेयर किन्न पनि हुन्छ। कुनै कम्प्युटरलाई गेटवे सर्भर बनाई त्यसमा सफ्टवेयर राखेर सबै कम्प्युटरमा एकैचोटि फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ।
कुनै कुनै कार्यालयले हार्डवेयर फिल्टरिङ गर्न छुट्टै फायरवाल पनि किनेका हुन्छन्। यो अलि महँगो हुन्छ। fortigate, sonickwall, cyberroam जस्ता विभिन्न खाले फायरवाल बजारमा पाइन्छन्।
राउटर छ भने राउटरमै पनि फायरवाल सेटिङ वा प्रोक्सी सेटिङ मिलाउन सकिन्छ। buffalo, mikrotik जस्ता राउटर सानो कार्यालय र घरका लागि उपयुक्त हुन्छन्। कार्यालय ठूलो छ र आफैंले फिल्टरिङ गर्न सम्भव छैन भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नै सहयोग गर्छन्। यस्ता आइएसपीहरूले ग्राहकको इच्छाअनुसार प्रोक्सीमा राखेर अनावश्यक वेबसाइटमा पहुँच रोकिदिन्छ।
वेब फिल्टरिङ राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
कम्प्युटरमै सर्वप्रथम पासवर्ड राख्ने गर्नुपर्छ। पासवर्ड राख्नाले आफूले ब्लक गरेको सेटिङ अरूले बिगार्न पाउँदैन। जुन सर्भरमा फायरवाल राखिएको छ, त्यसको पासवर्ड अरूलाई दिनु हुन्न। पासवर्ड सकेसम्म जटिल किसिमको राख्नुपर्छ।
सबैलाई तोकिएका साइट एकैपटक ब्लक गर्ने र समय पनि नतोकिदिने हो भने कार्यालयको वातावरण बिग्रन सक्छ। काम विशेषका आधारमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता साइट अत्यावश्यक पनि हुन्छन्। घरमा हो भने केटाकेटीलाई कस्ताकस्ता र किशोरकिशोरीलाई कस्ताकस्ता साइटमा पहुँच नदिने भन्नेबारे वेब फिल्टरिङ राख्नेबेला विचार पुर्‍याउनुपर्छ। यहीअनुसार सफ्टवेयर फायरवेलमा मिलाउनुपर्छ।
वेब फिल्टरिङ घर, कार्यालय मात्र नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट पनि गर्न थालिएका छन्। कुनैकुनै देशले सन्दर्भ र विषयका आधारमा निश्चित साइटहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, चीनले सामाजिक सञ्जाल, बाल यौनदूराचार, अपुष्ट समाचार, राजनीतिक विषयवस्तु आदि भएका वेबसाइट आफ्नो देशभित्र खोल्न नमिल्ने बनाएको छ। त्यस्तै बेलायतले बाल यौनदूराचारसम्बन्धी वेबसाइट रोक्नुका साथै कसले कुन मात्रामा इन्टरनेट चलाएको छ भनेर हेर्ने गरेको छ।
नेपालका सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यौनजन्य सयभन्दा बढी साइटहरू ब्लक गर्दै आएको छ।